Warshadaha news-Shenzhen SH-MBR Technology Co., Ltd.
Qaar ka mid ah faham la'aanta ku saabsan Nidaamka MBR ⑥
Membrane Bioreactor (MBR) waa isku darka geedi socodka xuubka sida microfiltration ama ultrafiltration oo leh geeddi socodka dhoobada firfircoon, taas oo keenta in lagu gaaro qaybaha dabiiciga ah ee aadka u hooseeya ee biyaha wasakheysan ee la daweeyay. Nidaamyada xuubku waxay bulaacadaha u beddelaan biyo nadiif ah oo tayo sare leh. Raad-yar ee tikniyoolajiyadda daaweynta waxay awood u siineysaa nidaamyada in lagu dhex-daro dabiiciga, hareeraha quruxda badan iyo in lagu daaweeyo biyaha wasakhda ah ee loo isticmaalo waraabka Soo saarida dhoobada ee habka MBR aad ayuu u hooseeyaa. Tayada qulqulka dareeraha ee MBR ayaa ka sareeysa dheecaanka caadiga ah ee ASP. Qiiqa ka soo baxa MBR dib ayaa loo isticmaali karaa codsiyada warshadaha ka dib daaweynta RO (Reverse Osmosis). MBRs waxay ku shaqeyn karaan MLSS aad u saraysa (Qalabka Liquor Suspended Solids) marka la barbardhigo ASP-ga caadiga ah (Habka Slopge Firfircoonida).
Waa imisa qiimaha qalabka daaweynta bullaacadaha isku dhafan?
Waa imisa qiimaha qalabka daaweynta bullaacadaha isku dhafan? Waxaan aaminsanahay in iibsadayaal badani ay weydiin doonaan su'aashan oo ay aad uga walaacsan yihiin su'aashan. Aan eegno xaaladda dhabta ah! Qalabka daaweynta bullaacadaha oo isku dhafan
Qaar ka mid ah faham la'aanta ku saabsan Nidaamka MBR ⑤
Qaar ka mid ah faham la'aanta ku saabsan Nidaamka MBR ④
Qaar ka mid ah faham la'aanta ku saabsan Nidaamka MBR ③
Isfaham la'aan qaar ka mid ah Nidaamka MBR MB